एक महिना देखी टेलिफोन सेवा अवरुद्ध – Hamropahuch
एक महिना देखी टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
हाम्रो पहुँच संवादाता २ जेष्ठ २०७८, आईतवार मा प्रकाशित
खलंगा, २ जेठ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका स्थानीय एक महिना देखि टेलिफोन सेवा बाट बञ्चित रहेका छन् । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको वडा नं. १०, ११ र १२ वडामा एक महिना देखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५ र मा पनि फोन सेवा अवरुद्ध भएको स्थानिय मोहन बस्नेतले जानकारी दिए । ‘टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानिय संचार सेवा वाट बन्चित भएका छन् फोन सेवा अवरुद्ध भएको १ महिना भयो सम्वन्धीत पक्षले चासो देखाएको छैन’ बस्नेतले भने ।
फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सुचना आदान प्रदान गर्न निकै कठिनाई भएको उनले बताए । यता नेपाल टेलिकम जाजरकोट शाखाका प्रमुख लोकेन्द्र अधिकारीले नलगाडमा पहिले सेवा अवरुद्ध थियो करिब दश दिन पहिले मर्तत गर्दा सेवा सुचारु भएको बताउनु भयो । आजनै खराबी आएको भए त्यसको जानकारी आफई नआएको र यदि खरावीनै रहेछ भने तत्काल मर्मत गरेर संचालनमा ल्याउछौं, त्यसैगरि रुकुमको घेत्मामा रहेको टावरमा ब्याट्रीमा समस्या भएका कारण सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको उनले बताए ।
अहिले कोरोना महामारीको वेला छ यस्तो अवस्थामा भनेको वेला सामान ल्याउन कठिनाई छ । त्यस कारण मर्मत कार्यमा ढिलाई भएको हो र अवको केही दिनमै मर्मत गरि सेवा सुचारु गरिने प्रमुख अधिकारीले बताए । यस्तै जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका स्थानीय पनि दुई महिना देखि सञ्चारविहीन बनेका छन् । टेलिफोन समस्या अवरुद्ध हुदाँ निकै समस्या परेको ईलाका प्रहरी कार्यालय पैंकका ईन्चार्ज गंगबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।